Ayax dhibaato ku haya Degmooyin ka tirsan Gobollada Daad-madheedh iyo Togdheer – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ayax dhibaato ku haya Degmooyin ka tirsan Gobollada Daad-madheedh iyo Togdheer
Deegaamo ka tirsan gobolka Daad-madheedh ayaa waxa dhibaato ku haya Ayax dhul-dageen ah, kaasoo xaaluf ku haya meelaha dhul-daaqsimeedka ah iyo dalagga Beeraha, isla markaana ku sii fidaya.
“Wax allaale wixii soo baxayey dam buu ka siiyey, si aanu wax uga qabananna garan mayno. Khudradii iyo saracii kale ee biqlayeyba wuxuu reebayaa ma jiro” sidaasi waxa Wariyaha Dawan u sheegay Cumar oo kamida Beeralayda degmada Oodweyne.
Xukuumadda Somaliland, ayaa bishii la soo dhaafay dabayaaqadeeddii ku dhawaaqday inay dawladda Itoobiya iska-kaashanayaan wax ka qabashada Ayaxan ku fidaya gobolka, kaasoo iminka howl-galka lagu waajihi karaa uu yahay in Diyaarado lagu buufiyo.
Faysa Cali Waraabe oo kahadlayay wararka sheegaya imaatinka madaxweynaha Somaliya ee...